Fialam-boly mpanompony voly Ary Job Description / Fanendrena Ary Andraikitry Template - JobDescriptionSample.org
Ny andraikitry ny mpampiasa vola sy ny andraikitra
Home / Uncategorized / Fialam-boly mpanompony voly Ary Job Description / Fanendrena Ary Andraikitry Template
Fialam-boly mpanompony voly Ary Job Description / Fanendrena Ary Andraikitry Template
Jacob Jona 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 1,258 Views
Graders Ary Sorters, Fambolena Products Job Description / Fanendrena Ary Duty Sample
Jona 28, 2016
Medical Transcriptionists Job Description / Functions Ary Accountability Sample
Shoe sy hoditra mpiasa sy ireo mpanamboatra Job Description / Andraikitra sy ny fandraisana andraikitra Sample
Fitondran-tena isan-karazany ny fidirana adidy amin'ny fifaliana na ny fialam-boly foibe. Mety fandaharam-potoana fampiasana traikefa nahafinaritra établissements, hihazona sy manome fitaovana ho mpilalao ny hetsika ara-panatanjahantena, na fialam-boly, na ny asa mahafinaritra sy handefitra Voyages.
Job Skills fahaizana
Supply momba misy ao, fialam-boly voafantina.
Report tsipiriany ny mpanatrika, fidiram-bola, faktiora, famandrihana, na manamboatra ny asa.
Diniho asa atao mba ho azo antoka ny fiarovana firaiketana fitsaboana sy ny tari-dalana, na handamina izay hanala tena toy mpanjifa.
Omeo tapakila ary hangonina fiampangana avy amin'ny mpividy.
Nanoro hevitra foana ny fanakatonana sy ny vonjy taitra dingana famoahana.
Diovy manana antony, fiara, Tours, efitrefitra, trano, na fitaovana.
Mpitsidika avy hatrany ny sidina, seza, na ny zavatra hita.
Amidio ary manome ranon-javatra amin'ny mpividy.
Milina miasa ho, ary ny madio tanteraka, mitovy tantana ny ranomandry faritra rinks ho tapaka ao anatin'izany ny Skateboarding, baolina, ary Curling.
Milazà na toerana fanaovana kermesy hanazava ny mpanjifa mba hisarihana ny mpanjifa mba hanitra ankasitrahana izay sy ny fiaraha-mientana hafa.
Mampiditra manome vaovao ho an'ny vokatra miraiki-po ho azy ireo, na fitaovana azo antoka ho an'ny mpanjifa.
Jereo entana mba hahita anaovan'ireo sy naratra ary manaova fanamboarana kely dia kely, fanitsiana na fikojakojana andraikitra ao anatin'izany oiling singa.
Run, Tsangatsangana, na hanazava ny fampiasana ny fitaovana fandidiana, na ara-batana fanampiny baikoina ny hevitra ao amin'ny toerana fialam-boly , carnivals, na ny voly parks.
Hire, fiahiana ara-panatanjahantena sy ny vokatra ao anatin'izany ny fitaovana Skating fitoriana, baseballs, Bowling kiraro, sy ny tora-pasika seza, na ny tsena.
Hamarino, hahazo, na totohondry seza alohan'ny mpanjifa manaiky ny toerana toy ny ohatra carnivals sy ny Tours.
Andraso fialam-boly efitrefitra amin'ny zaridainam-panjakana, na kianja, hanomezako fanomezam-pahasoavana, mitifitra mpanjifa, ary manome asa toy ny ohatra manome lalao.
Supply manampy mpanjifa miditra na manandratra Fivoahan'ny Ski, sambo, na mahafinaritra mitaingina, na mitombo na biby dismounting.
Fandaharam-potoana ny fampiasana ny toerana fialam-boly toy ny Bowling lalan-kely, Golf fitsarana, Golf lesona, ary softball diamondra.
Ataovy lisitra ny fitaovana, mitahiry, dia nahita ny zavatra sy ny fitaovana fanorenana.
Career Actions fepetra takiana mialohan'ny ahafahana
Mamaky Fahalalana-fahazoana ny fehezanteny sy nanomana andinin-tsoratra ao amin'ny asa mifandray Docs.
Fahaiza-mihaino-Inona ry namana hafa dia hoe manome hifantoka, mahazo fotoana ho anareo mba hahatakatra ny zavatra natsangana, nanontany fanontaniana mety, ary tsy fanotofana amin'ny toe-javatra tsy mendrika.
Namokatra-taratasy On tsy mba toy ny tsy mety ny fepetra takiana ho an'ny mpanatrika ny fifampiresahana tsara.
Niady hevitra Miteny amin'ny hafa mba hampitana fanazavana amim-pahombiazana.
Rafitrisa-Mampiasa matematika mba manamboatra olana.
Mampiasa fomba Research-politika sy ara-tsiansa mba hamahana olana.
Mampiasa Criticalthinking-dia niady hevitra sy ny antony hamantarana ny hery sy ny fatiantoka ny mpisolo toerana valiny, hita na fomba ny olana.
Active-Learning-fahatsapana ny hevitra soa ny tsipiriany momba izay vaovao vao haingana tsirairay sy ny hery anaty famahana olana sy fandraisana fanapahan-kevitra.
Ny fianarana Paikady-ny fifidianana sy ny fampiasana teachingPERtutorial fomba sy ny fitsaboana mety ny toe-javatra, rehefa mampianatra mahafehy na hevitra vaovao.
Fanaraha-maso-Tracking / Nahita miasa ny orinasa, hafa ry namana, na tena mba hamorona enhancements na handray fanitsiana asa.
Social fidirana-raha tsy mahalala ny othersI fanehoan-kevitra sy mahafantatra ny antony mitondra tena tahaka ny anaovany.
Control-manova fihetsika amin'ny fepetra mikasika ny othersI.
Marketing-mahomby hafa mba hanova ny fahazarana, na ny intellects.
Fanelanelanana-hamonjy ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana variances.
Fampianarana-Subscribe to ny hafa ny fomba hanaovana zavatra.
Service Orientation-antoka mitady paikady hanohanana olona.
Advanced Problemsolving-manavaka mandroso olana sy ny fikarohana mifandray amin'ny antsipiriany izay hanaiky sy ny hanangana sy hampihatra safidy fanafody.
Asa Evaluation-Fandinihana vokatra fepetra ary mila mamokatra ny fisehon'ny.
Teknolojia Design-fampifanarahana fitaovana na mamorona sy ny teknolojia mba hanome takiana tsirairay.
Fitaovana Selection-mamaritra fitaovana sy ny fitaovana ilaina ho zava-dehibe ny hatsaram-panahy hanao ny asa.
Andian-Manampy fampiharana, entana, cabling, na ny fitaovana amin'ny ankapobeny hihaona fepetra arahana.
Encoding-Manoratra solosaina fandaharana momba ny fampiasana samihafa.
Fanaraha-maso-nahita asa antso, fanombanana, na samy hafa hita mba ho azo antoka misy milina miasa amin'izao fotoana izao araka ny tokony ho.
Manoloana ny asa sy ny asa-Fehezo ny rafitra na ny fitaovana.
Maintenance-manao fikojakojana izay fahazarana eo amin'ny fitaovana sy ny manapa-kevitra raha ary inona no karazana fikarakarana takiana.
Fanamboarana-Famantarana antony fitantanana glitches sy mifidy izay lalana mba mandehandeha na dia iray akory izany.
Manamboatra-Famerenana vokatra na rafitra mampiasa ny fitaovana izay irina.
Quality-Control Rehefa nandinika-manao fitsapana sy ny fanombanana ny vokatra, vahaolana, na teknika hanombanana fahombiazana na ny tsara.
View sy ny fandraisana fanapahan-kevitra-fandinihana ny fiampangana sy tombontsoa mitovy amin'ny fiaraha-mientana izay azo atao mba hitadiavana ny anankiray izay no tsara indrindra mifanaraka.
Analysis-Inona no Atao hoe inona no mety ho dingana tsy maintsy miasa sy ny fomba fanovana eo amin'ny asa, olana, ary ny tontolo iainana ho fiantraikany vokatra.
Fomba Analysis-Famantarana hita ny fomba na ny fampisehoana, ary koa araka ny tanjona ny fitaovana, ny asa nanana ilaina ny hanatsara na tsy fahombiazany.
Timemanagement-Fandaminana olona iray ny fotoana.
Fitantanana ara-bola Resources-manapa-kevitra ny fomba vola dia azo antoka fa ho ampiasaina mba hahazoana ny asa vita, sy ny varotra ho an'ny ireo sarany.
Fitaovana fitantanana ny Lafin-Mandray sy miaina manoloana ny mety fampiasana ny vokatra, tolotra, sy ny fitaovana ilaina mba hanao ho zava-dehibe ny asa voafantina.
Fitantanana ny mpiasa Resources-Building, aingam-panahy, ary nanondro olona rehefa miasa, famantarana ny olona tsara indrindra ho an'izany asa.
Education fahaizana Knowledge Fepetra
Tsy ampy-noho ny Sekoly Ambony Diploma
Senior High School Diploma (na GED na Senior School Equivalence Certification)
Connect ny Level (na hafa dingana roa taona)
Job Control Skills Fepetra
Fahombiazana / andrana – 89.14%
tapa-kevitra – 87.50%
tetikasa – 86.46%
Leadership – 84.91%
Fiaraha-miasa – 90.99%
Manahy ny hafa – 93.81%
Cultural Fanitsiana – 84.16%
Fahafehezan-tena – 90.95%
Pressure tokonam-baravarana – 85.05%
fahamarinan-toerana – 88.27%
Tsara Detail – 84.62%
Tsy Nivadika – 83.74%
fahaleovan-tena – 83.13%
zava-baovao – 83.44%
poto-fisainana – 85.71%
Teo aloha Social Science Research Job Description Sample
Manaraka Ny andraikitry ny mpampiasa vola sy ny andraikitra
Model mpanao, Wood Job Description / Andraikitra Ary Andraikitry Sample
Vorio manontolo sy ny hazo isan-karazany ny habeny marina modely ny zavatra. Dia ahitana efi mpiasa sy hazo Nahasarika …
Jolay 24, 2018 amin'ny 1:13 PM
© Copyright 2020, Zo rehetra voatokana